စတိဗ်ဂျော့ဘ် မုန်းခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » စတိဗ်ဂျော့ဘ် မုန်းခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်း
Posted by ဇေယျာစံ on Apr 21, 2015 in Arts & Humanities, Celebrity, Computers & Technology, Creative Writing, Entertainment, History, Interviews & Profiles, Society & Lifestyle, Think Tank | 36 comments
“ လဲသေလိုက်လေ။ အဲဒီလို သောက်သုံးမကျတဲ့လူတစ်ယောက် အကြောင်း ကို ဘာများ အထွေအထူး ဆွေးနွေးနေရမှာလဲ .. ”
စတိဗ် ဂျော့ဘ် က အင်တာဗျူးး တခု မှာ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြောခဲ့ဖူးတယ် ဆိုရင် …
ဖြစ်ခွင့်ရမယ် ဆိုရင် .. ကျွန်တော် က စတိဗ်ဂျော့ဘ် ပဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ …။
အဲဒီလို အချိန်မျိုးမှာမှ အဲဒီ အကြောင်း ကို ကျွန်တော် အရင်ဆုံး ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်မှာ တော်တော့်ကို ကျွတ်သွားတယ်။ အမှန်ပါပဲ ..။
ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့အတိုင်း စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဆိုတာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့လူ ၊ ကွန်ပျူတာသမား ဆိုတာထက် အနုပညာသမား လို့ ပြောနိုင်ရင်လဲ ရနိုင်တဲ့ လူ၊ ကမ္ဘာလောကတခုလုံး ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ၊ …။
ဒီလို လူတယောက်ရဲ့ အရှက်တရား ကို ထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့သွားရလောက်အောင် ဘယ်လို အကျိုးတရား က စေ့ဆော်ခဲ့တာများလဲ ..။
ခုန စတိဗ်ဂျော့ဘ် ပြောတဲ့ လူက သူနဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တယ်။ ကျစ်လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ရှိတာချင်း တူသလို မျက်မှန်တပ်တာချင်းလည်း တူပါတယ်။ အကျီအနက်ရောင် ကြိုက်တာချင်း တူသလို ယုတ်စွအဆုံး .. ပြောရရင် ထိပ်ပြောင်တာချင်း က အစ တူပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီလူ ဟာ ..
စတိဗ်ဂျော့ဘ် ရဲ့ ညီအကိုတော်သူ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆွေမျိုးသားချင်း မဟုတ်သလို သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း လဲ မဟုတ်ပါဘူး။
တိတိကျကျ ဖွင့်မပြောခဲ့ပေမဲ့ စတိဗ်ဂျော့ဘ် အလွန် မုန်းတီးခဲ့တဲ့ လူတယောက်ပါ။
တိတိကျကျ ပြောရရင် သူဟာ .. Android OS ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ လူတယောက် ပါ။
သူ့ အမည် က …အန်ဒီရူဘင် တဲ့ ။
ငယ်ငယ်ကလေးတည်းကစပြီး အခုအချိန်အထိ မူပိုင်ခွင့် တဆယ့်ခုနှစ် ခု လောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဖြစ်တဲ့ အန်ဒီရူဘင် (Andy Rubin) ကို နယူးယောက်မြို့ရဲ့ မထင်မရှား ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက် တခုမှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။
သူ့အဖေက ပထမတော့ စိတ်ပညာရှင် အနေနဲ့ အသက်မွေးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ စီးပွားရေးပိုင်း အခြေအနေ သိတ်မကောင်းလို့ ကုမ္ပဏီ တခုမှာ ဥပဒေ အကြံပေး ၀င်လုပ်ပါတယ်။ အန်ဒီရူဘင် ကို ငယ်ငယ်ကလေးကတည်း က တီထွင်ချင်တဲ့ စိတ်ရှိလာအောင် ပြုစုပျိူးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ သူ့အဖေ ရော၊ ကုမ္ပဏီ ပါ ထိပ်ဆုံးက ကျေးဇူးရှိနေပါတယ်။ သူ့အဖေ ဟာ ကုမ္ပဏီ က ထုတ်လုပ်တဲ့ အီလက်ထရောနစ် ဂက်ဂျက် ကလေးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တနင်္ဂနွေအားရက်တိုင်း သားဖြစ်သူဆီကို ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
ကျောင်းနေတော့ စာသင်ခန်းထဲမှာ သတိထားမိအောင် သိတ်ပြီး လက်စွမ်းပြတာမျိုး မရှိခဲ့သလို ကျောင်းအားချိန်မှာ ခုံအလွတ်တခုပေါ်မှာ စဉ်းစားနေတာ ဟာ အန်ဒီရူဘင့် ရဲ့ အကျင့်တခု ဖြစ်လာပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ နွေနှောင်းရာသီ ရဲ့ ရက် တရက် မှာ Linux Kernel ကို အခြေခံထားတဲ့ Opertion System တခု ကို တည်ထောင်ဖို့ T-Mobile က သူငယ်ချင်းတယောက်ရယ်၊ ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီ က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရယ်၊ ဆက်သွယ်ရေးလောက က သူငယ်ချင်းတယောက် ရယ်၊ နည်းပညာ ပြင်ပ ကာလဖိုးနီးယားနယ် က စီးပွားရေး သမားတယောက် ရယ် ပူးပေါင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ OS ဟာ ပရိုဂရမ်သမားတွေ ဘက် က ကြည့်ရင် လွယ်ကူတဲ့ ပရိုဂရမ်မင်း ဖြစ်တဲ့ C++ ကို သုံးစွဲထားသလို ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး တွေ အရမ်းကြီးပါဝင်တာ လဲ မရှိတဲ့အတွက် ဆက်သွယ်ရေး လိုင်း ကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေတဲ့ အထောက်အပံ့ တွေ လဲ ပါရှိပါတယ်။ ဒီဇိုင်းသမားတွေ အကြိုက် GUI စနစ် ကို အပြည့်အ၀ လိုက်နာပါတယ်။ ပြီးတော့ ဈေးကွက် ကို ချပြနိုင်စေဖို့ အတွက် လူတကာ သုံးစွဲရလည်း လွယ်ကူစေပါတယ်။
ကုမ္ပဏီ ကိုလဲ Android Inc. လို့ ခေါ်ခဲ့ သလို အဲဒီ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ်ကို Android OS လို့ ခေါ်ဆို သမုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အစုအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ အန်ဒီရူဘင် တယောက် သိတ်မကြာခင်မှာပဲ ထူးထူးခြားခြား အသံတွေ ကြားလိုက်ခဲ့ရပါတယ်။
တခြားအသံ တော့ မဟုတ်ပါ။
သူရဲကောင်း ခရာ တွေ ပြိုင်တူ ဟစ်ကြွေးလာနေတဲ့ စစ်ချီသံတွေပါ။
Andriod OS ကို လွှင့်ထုတ်ခဲ့ပြီး သိတ်မကြာခင်မှာပဲ မိုဘိုင်း စစ်မြေပြင်မှာ တိုက်ပွဲကိုယ်စီ ၀င်ကြတော့မဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ စစ်ချီခရာသံတွေ နဲ့ စစ်မြေပြင် ရဲ့ ရနံ့၊ ရှုခင်းတွေနဲ့ ခက်ထန်တဲ့ သင်္ကေတတွေကို သူ ခံစားလိုက်မိတဲ့ အကြောင်း ကို နောက်ပိုင်းမှာ အင်တာဗျူးတခု မှာ အန်ဒီရူဘင် က အခုလို ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
“ ကျွန်တော် အခု နှစ်ခု တွဲကိုင်ထားရပါတယ်။ တခု က အနာဂတ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ရိုဘော့နည်းပညာ၊ နောက်တခု ကတော့ အခု လတ်တလော ဘ၀ ထဲက Google Chrome, Google Phone တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Project တွေ ပါ။ အခု လက်ရှိဘ၀ မိုဘိုင်း လောက ကတော့ ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ .။ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တယ်။ မနေ့တနေ့ကမှ စထောင်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ငယ်ကလေး က နေ့ချင်း သူဌေးဖြစ်သွားနိုင်သလို နှစ်ရှည်လများ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီး တခု ကလဲ ချက်ချင်းလဲ ပြိုကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ စစ်မြေပြင်မှာ စစ်သည်တော်တွေ အသိထားသလိုမျိုး အမြဲသတိရှိဖို့ လိုပေမဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ကမ်းကြိုဆိုရမှာပဲ မဟုတ်လား။ ပြိုင်ဆိုင်မှု ဆိုတာ ကိုက ကျွန်တော့် တို့ ဒီနေ့ခေတ်အတွက် စိန်ခေါ်မှု ပဲလေ.။ “
CNet အယ်ဒီတာတွေ က ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အန်ဒီရူဘင် ကို အင်တာဗျူးပြီးတဲ့အချိန်အထိ သူ့ကို ဘယ်သူမှန်း မသိသေးပါဘူး။ Android ကို လက်ခံရကောင်းမှန်း နဲ့ ကြိုက်ရကောင်းမှန်းလဲ မသိကြသေးပါဘူး.။
တဖြည်းဖြည်း နဲ့ အချိန်တွေ ကုန်လွန်ခဲ့ပါပြီ။
ဆယ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ အတွင်းမှာ Android က စတင် ဖူးပွင့်ခဲ့ပါပြီ။ ကွန်ပျူတာလောက မှာ လုံးလုံးနေရာမရခဲ့ပေမဲ့ ခေတ်လွန်ပလက်ဖောင်းမှာတော့ Andriod ရှဲု့ ချိုသာတဲ့ ဈေးကွက် ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ လူတောမတိုးလှပေမဲ့ တတိယကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အားပေးမှုတွေက ပေါင်မုန့် တစ်လုံးကို ခဏလေးနဲ့ တ၀က်ကျော်ကျော် သယ်မသွားနိုင်တဲ့ ပုရွက်ဆိတ်ကလေးတွေလိုပါပဲ. ။
အဲဒီအချိန်အထိ အန်ဒီရူဘင် ကိုေ၀၀ါးနေကြဆဲပါပဲ ..။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာတော့ ဆီလီကွန် တောင်ကြားတခုလုံးကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ စကားတခွန်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ စကားကို ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ business insider မဂ္ဂဇင်း တခု ထည့်သွင်းခဲ့တာပါ.။
ပြီးတော့ ကျွန်တော့်တိုရဲ့ ချစ်လှစွာသော စတိဗ်ဂျော့ဘ် က ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ အဲဒီကောင် က .. ၀ မရှိပဲ ၀ိ လုပ်နေတဲ့ကောင် “
(မူရင်းမှာတော့ .. big arrogant လို့ သုံးပါတယ်။)
ဒီ စကားကတော့ နည်းနည်းတော့ များတယ် လို့ ဆိုရမှာပါ။
ဆီလီကွန်တောင်ကြားမှာ လုပ်နေတဲ့ လူအချင်းချင်း အဲဒီလောက် ရည်ရွယ်ပြီး မပြောသင့်ဘူး လို့ ကျွန်တော် ထင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်သူမို့လို့ အဲဒီလောက် သူ ပြောရတာလဲ ..။ ဘီလ်ဂိတ် နဲ့များ ပြန်ပြီး ရန်ဖြစ်နေပြန်ပြီလား ..လို့ အားလုံး စိတ်ထဲ က ယူဆပြီး လေ့လာလိုက်တဲ့အခါ မှာတော့ လူတိုင်းအံ့သြသွားစေနိုင်တဲ့ လူတယောက် ကို ရှုာဖွေ တွေ့ရှိသွားပါတယ်။
အန်ဒီရူဘင် ဟာ Google 45 ထဲမှာ မပါဝင်ပါဘူး.။ Google 45 ဆိုတာ က Google ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပရိုဂရမ်မာ ၄၅ ယောက်ပါ။ အဲဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ခြိုက်တဲ့ လက်ရှိ သုံးစွဲနေတဲ့ Gmail ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ လူ တောင် ပါဝင်ပါသေးတယ်။ လူတော်တော်များများ က အန်ဒီရူဘင် ကို မသိကြပေမဲ့ Google ကတော့ သူတို့ရဲ့ တီထွင်ပါရဂူ ကို ဂူးဂဲလ်ရူဘင် (Google’s Rubin) လို့ ခေါ်ဆိုပြီး ချီးမြှောက်ခဲ့ပါတယ်။
နည်းပညာလောက ဟာ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တယ် ဆိုပေမဲ့ စတိဗ် ဂျော့ဘ် ရဲ့ စကားကို ကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ အံ့သြစရာကောင်းလှပြီး အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ အရင် ဆယ်စုနှစ်တွေ က မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်း နဲ့ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့သလိုမျိုး၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် နဲ့ အက်ပဲလ် နဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့သလိုမျိုး၊ အဲဒီ လိုမျိုး ဘက်နှစ်ဖက် ကွဲပြားသွားခဲ့ပါတယ်။
တချို့ က သူတို့ရဲ့ Apple iOS ဘက်မှာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး တချို့ကတော့ Google Android ဘက်မှာ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။
အခြေအနေတခု ကို ရုတ်ချည်း နှစ်ခြမ်းကွဲသွားအောင် ဘယ်သူကမှ ပြုမူခဲ့တာ မဟုတ်ပေမဲ့ ပစ္စက္ခလောကမှာတော့ အငြိုးကြီးမားတဲ့ ရန်သူတွေလို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါပြီ။ business insider စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ နောက်ထပ် လူသိနည်းတဲ့ အချက်တချက်ကတော့ Google Android ဟာ Apple iOS ရဲ့ နည်းပညာပိုင်း ကို တထပ်ထည်းကျအောင် လိုက်ပြီး တုပထားပြီး kernel သုံးစွဲမှုတွေက အစ ထပ်တူညီတယ် လို့ စတိဗ်ဂျော့ဘ် က စွပ်စွဲထားတဲ့ အချက်ပါပဲ။ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ဒေါသတရားတွေကို Android ပေါ်ကို စုစည်းစေခဲ့ပါတယ်။ စာထဲမှာ ဖော်ပြဖို့ မသင့်တော်လှတဲ့ ညစ်ညမ်း စကားလုံး နဲ့ ဆဲဆိုမိတဲ့ အထိပါပဲ။
“ Andriod က iOS ကို တော်တော့် ကို ခိုးချထားတာပဲ .။ အရာရာအားလုံးကို သောက် ….ပဲ “ လို့ ဆဲဆိုခဲ့ကြောင်း business insider မှာ ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ အန်ဒီရူဘင် က ဘာတခု မှ မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ပေါက်ကွဲမယ်ဆိုရင်လဲ ပေါက်ကွဲချင်စရာပါ။. ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ AndyRubin ဟာ ကမ္ဘာကျော် Apple Inc. ကုမ္ပဏီကြီးမှာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်နဲ့ တာဝန်ယူဖူးတဲ့ အတွက်ပါပဲ ..။ “ အဲဒီ မပြေးသော် ကန်ရာရှိ “ နေတဲ့ အချက်ကို လေ့လာသူတွေ ထပ်ပြီးတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ Google ကနေ ရိုဘော့တက္ကစီတွေ ထုတ်လုပ်မဲ့ စီမံကိန်း ရှိနေပါတယ်။ လူတွေရဲ့ နေအိမ်တွေကို အင်တာနက် အခမဲ့ စီမံကိန်းလဲ ရှိနေသလို အဲဒီအိမ်တွေမှာ သုံးစွဲမဲ့ နည်းပညာတွေကိုလဲ ရိုဘော့နည်းပညာတွေကို သုံးစွဲဖို့ နဲ့ ရိုဘော့တွေကိုယ်တိုင် လူတွေကို ကူညီမဲ့ အစီအစဉ်တွေအတွက် အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်တွေ လျာထားနေပါပြီ။
အဲဒီ project တွေဟာ အန်ဒီရူဘင် ရဲ့ စိတ်ကူး အပိုင်းအစတွေကနေ ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ သူကိုယ်တိုင် လဲ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် လုံလောက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိထားပါတယ် လို့လဲ အန်ဒီရူဘင် က ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စီမံကိန်း တော်တော်များများ ဟာ Apple ရဲ့ Secret Projects တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလေ့ရှိပါတယ်။ အခု ၂၀၁၅ ခုနှစ် မှာ မော်တော်ကားတွေပေါ်မှာ သုံးစွဲမဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Apple နဲ့ Google Android တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့စရာ အကြောင်း ရှိနေပါတယ်။
အင်း .. ပြောရမယ် ဆိုရင် ..
အန်ဒီရူဘင် နဲ့ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ၀ိညာဉ် တို့ နောက်ထပ် နယ်ပယ် တခုမှာ
ထပ်ပြီး တိုက်ခိုက်ကြဦးမယ် ထင်ပါရဲ့ ။
“ ကျုပ်ကတော့ ကမ္ဘာမြေဆုံးသွားတဲ့ အထိ၊ ကျုပ်သေတဲ့ အထိ ခွင့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး .. ”
မီးစာကုန်၊ ဆီခမ်းတဲ့အချိန်… စတိဗ်ဂျော့ဘ် သေခါနီးအထိ စစ်ကြေငြာခဲ့တယ် လို့ ပြောလာခဲ့မယ် ဆိုရင် …
ကျွန်တော် အံ့သြသွားမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
(ကန့်လန်ကာနောက်ကွယ် က တီထွင်သူများအကြောင်း ၅)
zay san has written5post in this Website..
~ လူစွမ်းကောင်းများ သည် အတွင်းခံဘောင်ဘီ ကို အပြင်ထုတ်ဝတ်ကြ၏
View all posts by ဇေယျာစံ →
ခုမှ သေချာသိတဲ့ အရာတွေ…
tech space မှာလား လိုင်းပေါ်မှာလား မမှတ်မိတော့ဘူး
(နည်းပညာလောကမှာအောင်မြင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြဲလိုသုံးနေတဲ့ အဲဒီနည်းပညာထုတ်ကုန်တိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာအများမြင်ကွင်းရှေ့ကိုတိုးထွက်မလာပဲအေးချမ်းစွာရပ်တည်နေလေ့ရှိတဲ့ ပညာရှင်အတော်များများရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အကြောင်းတွေကို ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာဂျာနယ်၊ ကွန်ပျူတာမဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစပြီးရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဥပမာ .. Photoshop ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ ညီအစ်ကို၊ Gmail ကိုရေးခဲ့တဲ့လူ၊ Google News ကိုရေးခဲ့တဲ့လူ၊ iPhone ဒီဇိုင်းထွင်တဲ့သူ ..စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းပါ.။ အခုဆောင်းပါး က က ကျွန်တော်တို့တွေ အမှတ်မဲ့ မေ့လျော့နေတဲ့ တီထွင်ပညာရှင်တစ်ယောက် အကြောင်းပါ ..။)
အရေးအသားက ကျစ်လျစ်ပြီး သပ်ရပ်နေတာပဲဗျ
ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် တင်ပြပေးသူကို ဇူးဇူးပါ
Techspace ဂျာနယ် မှာ အဖုံးဆောင်းပါး ပါခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် မသိလိုက်ပဲ ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးတွေကို ကောင်းကောင်းခိုးသွားတဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ကြောင့် ပါ။
Ref: က ဒါတွေပါ။
(ကန့်လန်ကာနောက်ကွယ် က တီထွင်သူများအကြောင်း ၅) ဆိုတော့
ရှေ့တွေ နောက်တွေမှာ ကျန်ဦးမယ်ထင်တယ်
ရှေ့က ၄ ခု က ၂ ခု ပဲ ပြန်ရှာတွေ့တော့တယ် ဗျာ …
စာပြန်စီပြီး တင်ပေးပါ့မယ် ဗျာ..။
အဲလို ရှာဖွေပေါင်းစပ်ပြန်ရေးတာမျိုးဆို.. ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာသုံးဖို့မျက်စောင်းထိုးနေ..။
Xerox အတွက် ပေးဆပ်လိုက်တယ်လို့ သာ မှတ်လိုက်ပါတော့။
ကိုယ့်တို့ ဟီးရိုး စတိဗ် ရဲ့ နှာတံကျ က က ချွန်ချွန်၊ နှုတ်ခမ်း က တိတိ ပိပိရိရိရိပါးပါး၊ မျက်ဝန်း က စူးစူး၊ မျက်နှာကျ သွယ်သွယ်၊ မျက်မှန် က အဝိုင်းတပ်တာလဲ မတူ နဲနဲ လေးမှ ဆင်တယ်လို့ မမြင်ပါကွယ်။
ဒီနေရာမှာ… အရီးနဲ့ ကျွန်တော် သဘောထားနဲနဲလွဲပြီဗျ…
Xerox ဆီကနေ GUI ကို Steve ကျော်လာခဲ့တာဆိုပေမယ့်…
Xerox က လူထုကြားထဲချပြဖို့… တီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး…
၀ါသနာရှင်တွေစုဝေးပြီး သူတို့တီထွင်မှုကို Knowledge share လုပ်ခဲ့တာပါပဲ…
ဒါပေမယ့် တကယ့် Professional use ဖြစ်အောင် Steve က Develop လုပ်ခဲ့တာပါ…
ဟဲဟဲ… ဒီနေရာမှာ Bill Gate ကြီးကိုလဲ ထည့်မပြောမဖြစ်ပေါ့ဗျာ…
ပန်းသီးရဲ့အားနည်းချက်ကို Bill Gate က တွေ့ပြီး Windows နဲ့ လုပ်စားလာလိုက်တာ…
အခု Windows ကလွဲရင် တခြားဘက်မှာ ခွေးလုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့လေ…
ကျွန်တော့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်လောက်က လာငြင်းခဲ့ဖူးသဗျ…
Windows PC နဲ့ Windows Mobile ပေါင်းလိုက်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုလားပဲ…
အဲဒီကတည်းက ကျွန်တော်ကြိုပြောခဲ့ပါတယ်… Microsoft အဲဒီဘ၀ကို မရောက်တော့ဘူးလို့…
Android ဟာ iOS လိုမျိုး Mobile OS ဘယ်တော့မှဖြစ်မလာဘူးခင်ဗျာ….
သုံးတဲ့လူများချင်များမယ်… မားကက်ရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ကြီး စက်ရုပ်က ဘယ်လောက်ရပြီဘာညာ… အော်ချင်အော်နေမယ်…
၃၀% လောက်ပဲရှိတဲ့ iOS ဆိုတာ Apple တစ်ခုထည်းကထုတ်တာ….
ကျန်တဲ့ ၇၅% ပဲ Android ရှိရှိ… သူ့ကို Develop လုပ်တဲ့ လူတွေအများကြီး….
အများက တစ်ယောက်ကို မျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့ လိုက်လုပ်နေရတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုများဗျာ…
Percentage တွေမအော်စမ်းပါနဲ့ ကြားမကောင်းပါဘူး…
Android က iOS ကိုယှဉ်နိုင်ဖို့
Windows Mobile က iOS ကို ယှဉ်နိုင်ဖို့…
iTune Store လိုမျိုး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Store တစ်ခုလိုသဗျ…
အဲဒါ နောက်ဆုံး အဖြေပါပဲ…
.ဒီစာလေးကောင်းလိုက်တာ..ရွာသားသစ်ထင်တယ်လို့တွေးပြီး ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်တွေ လိုက်ကြည့်မှ ပေါ်တော်မူပဲ။
.အရင်ရေးလက်စ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးသမားတွေ အကြောင်း (၃)ကို ဘယ်တော့ ဖတ်ရမလဲ စောင့်နေတာ။
.ဧကန္တတော့ ရွာသူတွေ အကြောင်း ရေးမှာ မို့လို့ ဒီလောက်ကြာနေတာဖြစ်မယ်။
မြန်မာအကြောင်းတွေပါ ပါမှာမို့လို့ ..
စာမူတွေကို ဖတ်ဖြစ်တယ် ဆိုလို့ မပုဒ္ဒမာ ကို ကျေးကျေးပါ ဗျာ ..။
Long time no see ဘာတွေ ဘယ်မှာလုပ်နေလဲ။ အားလုံးအိုကေလား… အရင်ဖုန်းပဲ ကိုင်တာလား။
မမြင်ရတာ အရှည်ကြီး ..။
ကိုယ်က အဲဒီနယ်ပယ်နဲ့ လားလားမျှ မသက်ဆိုင်သူဆိုတော့ စတိဗ်ဂျော့ တို့ ဘီလ်ဂိတ် တို့လောက်သာ ကြားဖူးတာ… ခုလိုလေး ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်…
စတိဂျော့ကိုမုန်းဒယ်။ အန်းထရွိုက်ပဲ ကြိုက်တယ်။
ပို့စ် ထက် အာ့ဂ ဂယ်ဂျီးလားလို့ ….
လူစွမ်းကောင်းများ သည် အတွင်းခံဘောင်ဘီ ကို အပြင်ထုတ်ဝတ်ကြ၏
စူပါမန်း ကို မြင်ကြည့်လေ ဒေါ်ဝါးလေး။ lol:-))) :))
Batman နဲ့ Spiderman လဲ ဒီလိုဘဲ။ :-)))))))))
မ​သေ​သေးရင်​ ခုချိန်​ ​ရှောင်​မိကို ဆဲ​နေ​လောက်​ဘီ
Good artists copy, best artists steal.
မဆဲလောက်ဘူး ထင်တယ် ဗျ။
သူက ပြိုင်ဖက်ကိုသာ ဆဲတာပါ။
မိ က အိုင်​အိုအက်​စ်​သာမကဘူး ၀က်​ဆိုက်​ပါ ​ကော်​ပီကတ်​တာခည
ဘီးကျဲက သူ Xerox က ဘတ်​ရင်​​တော့​ကောင်းတယ်​
သူ့ဆီက တွမ်​ရင်​​တော့ အဆဲထူသလားမ​မေးနဲ့
Android OS ကအသုံးလွယ်သပေါ့
ဒါကြောင့်လဲAndroid OS ကပေါက်လာတာနေမှာ
ခင်ဗျား ဘာသာပြန် ထားတာ တယ်မိုက်သဗျာ …။
“ဝ .. မရှိဘဲ ဝိ လုပ်နေတဲ့ အကောင်” ဆိုပြီး ပြန်ထားတာလေး ရေလည် ခိုက်တယ် …။
ကျွန်တော်ကတော့ ခုမှ ဒီအကြောင်း ဖတ်ဖူးသဗျ ..
ဒီအတွက် ကျေးဇူးပါနော့ ….။
အောက်က စာတွေကတော့ ဒီပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှုမြင်တဲ့ ကျွန်တော့် အတွေးတွေပါပဲ …
ဘယ်လိုပင် အသစ်တီထွင်ခဲ့တယ် ပြောပြော …
ဟိုယခင်က တီထွင်ခဲ့ဖူးပြီးသားတွေပါပဲ …
… ဒါက ကျွန်တော့် အတွေးပါ …။
တစ်ခါတစ်ခါ စာတွေ ရေးရင်းနဲ့
စကားလုံး အသစ်အဆန်းလေး ရလိုက်တယ် ဆိုပါစို့ ….။
ကိုယ်ကတော့ ဝမ်းသာအားရ ဒါ ငါ့စကားလုံးကွ ဆိုပြီး ဟစ်လိုက်ပေမယ့် …
ဒီစကားလုံးအတိုင်း ရှာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်း …
. အော် .. သူများသုံးပြီးသားကြီးပါလား ဆိုပြီး တွေ့ရပါတယ် ….။
“Copy” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သေချာကြည့်ရင် …
အတိတ်ကို Copy လုပ်ခြင်းကိုတော့ ပြန်လည် တူးဆွခြင်း၊ တူးဖော် တွေ့ရှိခြင်း၊ အသက် ပြန်သွင်းခြင်း .. ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ တင်စားတတ်ကြပြီး …
လက်ရှိကို Copy လုပ်ခြင်းကိုတော့ဖြင့် သူ့ဟာ၊ ငါ့ဟာ အချင်းများတတ်ကြပါတယ် …။
Copy ချင်း တူညီပေမယ့် အချိန်ကာလပေါ် လိုက်ပြီး လူတွေက အတော် ပြောင်းလဲတတ်ကြတယ် …။
.. ဇေယျစံ ငွေသာမှန် စေကာပြန် မြွေပါကြံ